Iinqwelo-moya zaseNorway ekwandiseni ngokukhawuleza ukongeza iindawo ekuya kuzo i-USA
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » isikhululo » Iinqwelo-moya zaseNorway ekwandiseni ngokukhawuleza ukongeza iindawo ekuya kuzo i-USA
Airlines • isikhululo • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zaseFransi ezaphulayo • Utyalo mali • Iindaba zase-Itali eziQhekezayo • iindaba • Iindaba zaseNorway zokuPhula • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo
INorway iya kongeza ezinye iindlela ezimbini zaseYurophu ezingamisiyo ngaphandle kweBoston's Logan International Airport ngehlobo elizayo, kunye nokususa inkonzo yayo yaseLondon ukusuka eFort Lauderdale-Hollywood International Airport ukuya kwisikhululo senqwelomoya saseMiami nakwisikhululo senqwelomoya saseOakland ukuya kwisikhululo senqwelomoya saseSan Francisco. INorway ibonelela ngeendlela ezingamisiyo ukusuka eCalifornia naseFlorida ukuya eYurophu, kwaye ezi ntshukumo ziya komeleza ukusebenza kweenqwelo moya kuwo omabini la mazwe.
“Siyaqhubeka nokuqinisa ukuzibophelela kukaNorway e-US njengoko le yenye yezona ntengiso zethu zibalulekileyo. Amaxabiso aphantsi eTransatlantic ahlala kakuhle kubakhenkethi baseMelika nakubakhenkethi kwezoshishino, ngakumbi xa behambelana namava ethu okufumana amabhaso. Iindlela zethu ezintsha kunye nokwanda kwamaza kuya kusenza sikhuphisane ngakumbi ngelixa sinika amaMelika ukhetho oluninzi kunye nezinye iindlela zokonga nokonwabela uhambo, utshilo uBjørn Kjos, uMseki kunye neCEO yaseNorway.
Ukongeza, i-airline izakuhambisa iindlela zayo ezimbini ezingapheliyo eLondon ukuqala ngoMatshi 31, 2019. Inkonzo eya eLondon eqhubeka ngoku isuka eFort Lauderdale iya eMiami naseOakland isiya eSan Francisco. UMiami ukuya eLondon uya kuba yinkonzo yemihla ngemihla, ngelixa iSan Francisco eya eLondon iza kuba kahlanu ngeveki.
“Siwongekile sisigqibo saseNorway sokusungula inkonzo yaseMiami yokuqala, eza kuthi kungekudala inike abakhweli bethu enye indlela yokuma bengayeki ukuya eUnited Kingdom naseYurophu. Sijonge phambili ekwamkeleni inkonzo yabo yokuphumelela amabhaso kwi-MIA, apho phantse isigidi sabakhweli sele behamba besiya e-UK minyaka le, ”utshilo uLester Sola, uMlawuli kunye ne-CEO yeSebe lezoPhapho laseMiami-Dade.
"Siyavuya ukwamkela inkonzo yaseNorway phakathi kwe-SFO neLondon ngentwasahlobo yowama-2019. Ngale ntshukumo, abahambi bangonwabela ixabiso elimnandi laseNorway kunye ne-SFO yokuphumelela, amava e-moya kwinqanaba lehlabathi," utshilo uMlawuli weSikhululo senqwelomoya saseSan Francisco uIvar C Satero.
IsiNorway sonyusa amaza kwezinye zeMadrid, eParis naseRoma inkonzo evela kwezinye iindlela zase-US zeshedyuli ye-2019:
• IDenver iya eParis iza kunyuka iye kwiinqwelomoya ezintathu ngeveki, ukusuka kabini ngeveki.
• IFort Lauderdale isiya eParis iza kunyuka iye kwiinqwelomoya ezintathu ngeveki, ukusuka kwisibini ngeveki.
• ILos Angeles iye eParis iza kunyuka iye kwinkonzo yemihla ngemihla, isukela kwiveki ezintandathu ngeveki.
• ILos Angeles iya eMadrid iya kunyuka iye kwiinqwelomoya ezine ngeveki, ukusuka kwisithathu ngeveki.
• ILos Angeles iya eRoma izonyuka iye kwiinqwelomoya ezine ngeveki, ukusuka kwisithathu ngeveki.
• INew York iye eMadrid izakwandisa ukuya kwinkonzo yemihla ngemihla, inyuke ukusuka kwisine ngeveki.
• I-Oakland iya e-Roma iyonyuka iye kwiinqwelomoya ezintathu ngeveki, ukusuka kabini ngeveki.
• IOrlando ukuya eParis iyonyuka iphindwe kabini ngeveki, inyuke ukusuka kube kanye ngeveki.
INorway ngoku izakusebenza kwizikhululo zeenqwelo moya eziyi-17 eUnited States, kwaye inikezela ngeendlela ezingaphezu kwama-50 ezingamisiyo ukuya eYurophu, kunye neendlela ezine ezisuka e-US zisiya eGuadeloupe naseMartinique kwiCaribbean yaseFrance, kunye neendlela ezintathu zokuphuma eCanada.
Kukho i okuninzi okutshas kwiiNorway Airlines kwi-eTN.